Itoobiya: Dibadbaxyo looga soo horjeedo falalka ammaan darada ... | Universal Somali TV
Itoobiya: Dibadbaxyo looga soo horjeedo falalka ammaan darada oo ka dhacay gobolka Amhara.
Waxaa weli jira xiisad ka dhalatay dhimashada laga soo sheegay gobolka Amhara ee Itoobiya ka dib markii ciidamada ammaanka ay toogteen oo ay ku dileen tiro dad ah sabtidii halkaasi.
Boqolaal mudaaharadaya ayaa qaaday waddooyinka ka dib markii dhacdada looga soo horjeedo falalka ammaan darada ay sababtay dhimashada. Wargeyska The Reporter news portal ee Itoobiya ayaa sheegay in ay jiraan warar sheegaya in rasaas wali laga maqlayay magaalada Woldiya.
Shabakadda maxaliga ah ee Addis Ababa, ayaa soo bandhigay sawiro muujinaya dadka ku mudaaharaadaya jidadka Woldiya halkaas oo ay dhacdadu ka socotay. magaaladaas oo 510 km u jirta caasimadda, Addis Ababa.
Dhalinyara badan oo u dabaal-degaya dhacda diimeed ayaa qaaday wadooyinka magaalada taas oo isku bedeshay mudaaharaad dawlada lid ku ah iyo heeso keenay iskudhac iyo dhimasho kaddib.
Tirada dhimashada, oo u dhaxaysa shan iyo in ka badan, ayaa la sheegay in ay kor u kacayso sida ay wararku sheegayaan. Ciidamada ammaanka ee federaalka ayaa la sheegay in ay rasaas ku fureen dadka dhalinyarada ah ee ka qeybqaatay xaflad diineedka, the Epiphany.
Afhayeenka Gobolka Amhara ayaa xaqiijiyay dhimashada, waxaana uu intaa ku daray in baaritaan uu socdo si loo ogaado xaqiiqda dhabta ah ee arinta. Dembiilayaasha ayaana la horkeeni doonaa sharciga, ayuu raaciyey.
Wararka ayaa sheegaya in gobolka la geeyay ciidamo ammaan oo fara badan oo federal ah iyo kuwa gobolka Amhara laga soo bilaabo bishii December ee la soo dhaafay ka dib isku dhacii ciyaarta kubadda cagta.
Gobolka ayaa sidoo kale laga soo sheegaya jahwareer dhanka jaamacadaha oo lagu tilmaamay inay saameeyeen weerarrada qowmiyadeed.
Kan-xigaMadaxa siyaasadda arrimaha dibadda Mi...
Kan-horeSaraakiisha Caafimaadka ee Dowlad Gob...
41,765,486 unique visits